आज मान्छे को स्वास्थ्य को जटिलता कारण एक नम्बर कारण हुन सक्छ। कहिलेकाहीं, केही रोगहरु यो मानव शरीर को लागि एक अविश्वसनीय विपत्तिजनक परिणाम निम्त्याउँछ भनेर गम्भीर छन्। त्यसैले, विकार को एक किसिम को फलस्वरूप, केही विरामीहरु आफ्नो भोक वा त्यस्तो निगल बिगडा क्षमता रूपमा आफ्नै खाना, प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता, गुमाउन एक लामो समय को लागि रोगी अचेत हुँदा वा खाना चपाउनु यसलाई शारीरिक थकान को प्रभाव समाप्त गर्न सन्तुलित पोषण उपचार आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा, रोगी विशेष गुण चिकित्सकीय जटिल द्वारा खुवाउनुभयो हुनुपर्छ (या त orally वा gavage द्वारा)। यस्तो जटिल छ कसरी प्रभावकारी मा, यो मौका र रोगी को रिकभरी को गति निर्भर हुनेछ।
"मड्यूलर Berlamin" यस सन्दर्भमा प्राप्त दबाइ एक राम्रो प्रतिष्ठा। के बिल्कुल पोसिलो जटिल छ? यो भाग के घटक हो? दबाइ कसरी उपयोगी र पौष्टिक मानिन्छ? प्रभावकारी यो औषधीले? यसले कसरी काम गर्छ? कसरी ठीक प्रश्न मा औषधि प्रयोग गर्न? माथिको र अन्य प्रश्नहरूको जवाफ यस लेखमा पछि छलफल गरिनेछ।
"Berlamin मड्यूलर" समीक्षा र विशेषज्ञहरु मानव शरीर को सामान्य कामकाज लागि अत्यावश्यक छन् जो विभिन्न पदार्थ, को सेट अविश्वसनीय कसरी प्रभावकारी परिभाषित। यस दबाइ को प्रयोग बिरामीको गुणस्तर खाना र यसको ताप ब्यालेन्स सन्तुलनमा मदत गर्छ।
दबाइ "Berlamin मड्यूलर" निर्देशन एक विशेष स्वास्थ्य भोजन, विभाग को एक किसिम संग विरामीहरु लागि प्रयोग गरिन्छ जो भनिएको छ। यस दबाइ प्रभावकारी शरीर मा चयापचय प्रक्रियाहरू को कार्यान्वयन स्थापित गर्न मद्दत गर्छ। दबाइ सम्भव चाँडै रोगी को समाप्त सेना पुनर्स्थापना बनाउँछ।
यो एक अद्वितीय दबाइ दबाइ को "Berlamin मड्यूलर" प्रदान गर्दछ। तसर्थ, सुक्खा मिश्रण को तीन सय साठी ग्राम सोया प्रोटिन र दूध बीस-छ ग्राम, साथै आवश्यक एमिनो एसिड को एक नम्बर (3.85 जी valine arginine को 3.53 जी, methionine को 1.44 जी, 5.76 जी leucine,4समावेश, 68 G lysine 0.83 जी tryptophan, 3.38 जी isoleucine, threonine को 2.52 जी, histidine को 1.94 जी, phenylalanine 3.38 G)।
बोसो (palmitic एसिड को 6.40 ग्राम, linoleic एसिड को 27.2 ग्राम र linolenic एसिड को 3.99 जी, myristic एसिड को 0.11 जी, Stearic को 3.35 जी: दबाइ वृद्धि लागि जीव निम्न आवश्यक घटक समावेश "मड्यूलर Berlamin" को रूपमा र oleic एसिड को 10.87 G), कार्बोहाइड्रेट (dextrins 188,3 ग्राम, lactose को 0,072 जी, maltose को 23,7 जी, 5.76 ग्राम ग्लुकोज) र macro- र microelements (972 एमएल सोडियम को एक किसिम, जस्ता को 17.6 एमएल, पोटासियम को 1620 एमएल, फलाम 17.6 एमएल, क्याल्सियम को 972 एमएल, फस्फोरस 648 एमएल, 1540 एमएल मा म्याग्नेशियम क्लोराइड को 230 एमएल, 48,6 एमएल सेलेनियम, 1620 मिलीग्राम तामा, आयोडिन को 216 मिलीग्राम, मैंगनीज को 2300 मिलीग्राम, 86,4 मिलीग्राम मोलाइबडेनियम, 1660 माइक्रोन फ्लोरिन र क्रोमियम को 79,2 माइक्रोग्राम)।
अन्य घटक केही भिटामिन हालतमा (taurine को स्कोर: 88.2 शुद्धता एमएल, retinol एक को 972 मिलीग्राम, 144 UG phylloquinone K डी 461 IU calciferol, inositol, फोलिक एसिड को 64.8 एमएल, 0.29 एमएल, 24.5 एमएल tocopherol ई को घटक हो4, cyanocobalamin को 32 मिलीग्राम, 64.8 मिलीग्राम बायोटिन, 270 एमएल एस्कोर्बिकएसिड, pantothenic एसिड को 10 एमएल, riboflavin, nicotinamide, 23 एमएल, 1.8 एमएल pyridoxine को 2.3 एमएल, 1.8 एमएल thiamine, choline 309,6 एमएल)।
तयारीको को ऊर्जा मूल्य एक हजार छ सय र बाह्र क्यालोरी मानिन्छ।
"मड्यूलर Berlamin" भिटामिन जटिल प्रभावकारी बोसो घाटा, कार्बोहाइड्रेट र प्रोटीन भर्नु तिनीहरूलाई normalizing, मानव शरीर मा चयापचय प्रक्रियाहरू असर गर्छ। सन्तुलित पोषक तत्व जटिल मानिन्छ रूपमा लागूपदार्थ यसको संरचना बिल्कुल सबै एमिनो एसिड भिटामिन र खनिज, बोसो र कार्बोहाइड्रेट यसको सामान्य कामकाज लागि शरीर, साथै द्वारा आवश्यक मा समावेश छन्।
यो तयारी अवस्थामा जहाँ रोगी यसको सामान्य गतिविधि (आवश्यक एमिनो एसिड, भिटामिन, पहिल्याउन तत्व, खनिज, प्रोटीन, बोसो र कार्बोहाइड्रेट सहित) प्रदर्शन गर्न आवश्यक सबै सामाग्री संग शरीर आपूर्ति हुनेछ जो गुणस्तरीय नैदानिक पोषण, आवश्यक मा प्रयोग गरिन्छ। पनि "Berlamin मड्यूलर" समीक्षा र विशेषज्ञहरु रोगी छैन चपाउनु र खाना निल्छ गर्न सक्षम जहाँ अवस्थामा प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं। त्यहाँ खाना उत्पादनहरू साधारणतया esophagus पास गर्न सक्नुहुन्छ अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्था हुन्छ जब चेतना को हानि को एक पर्याप्त लामो अवधि र प्रारम्भिक postoperative अवधिमा। सामान्यतया, यो चोट लागेको, स्ट्रोक, dysphagia ट्यूमर, esophageal बाधा विभिन्न द्वारा ट्रिगर हुन सक्छ।
साथै, दबाइ अवस्थामा एक व्यक्ति जानिजानि कारण गंभीर निराशा र anorexia मा भोक को मामला मा खाना इन्कार जहाँ प्रभावकारी हुन्छ। र यस्तो गम्भीर बल्न, sepsis, एड्स, क्यान्सर, क्षयरोग, celiac रोग, रसायन चिकित्सा र विकिरण, polytrauma, कलेजो रोग, अग्नाशयी रोग र hepatic, श्वसन, गुर्दे र हृदय विफलता रूपमा फरक catabolic अवस्था मा प्रयोग हो।
हामी कडा "Berlamin मड्यूलर" समीक्षा को प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं। छोराछोरीलाई यो दबाइ बस बेबदल छ बढ्न, तर हामी बच्चाहरु जीवनको पहिलो वर्षको लागि यसको प्रयोग गर्न सक्दैन लागि। बालक जन्ममा र स्तनपान समयमा प्रभावकारी यस उपकरण, साथै नियमित र गहन शारीरिक गतिविधिहरु।
विचार लिएर दबाइ हुनुपर्छ। यो एक पेय को रूप मा, विभिन्न तरिकामा, जस्तै मा गर्न सकिन्छ एक जांच मार्फत। प्रयोग गर्नुहोस् "Berlamin मड्यूलर" र आधारभूत आहार गर्न थपिएको रूपमा र विभिन्न व्यञ्जन को एक भाग (उदाहरण, सूप या सस लागि) को रूपमा। सामान्यतया, प्राथमिक काम औषधिको खुराक प्रति समाधान को सय milliliters औषधीय पोषक तत्व समाधान क्यालोरी सय kilocalories तयार हुनेछ जो पाउडर प्रति सय पानी milliliters, तीस ग्राम छ।
"मड्यूलर Berlamin" दबाइ को प्रयोग गर्न प्रत्यक्ष contraindication यस्तो रोग र यस्तो ileus, anuria, र रूपमा अवस्था हो hepatic coma। साथै, यसलाई विशेष प्रोटीन गाई गरेको दूध र सोया गर्न, जठरांत्रिय रक्तस्राव, तीव्र pancreatitis (यो विशेष विनाशकारी फारम), साथै एलर्जी केहि प्रकारको ग्रस्त गर्ने विरामीहरु यो भिटामिन जटिल प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दैन।
स्वागत गर्न अवरोध पनि बारी मा एक lipase वा bile एसिड को कमी को कारण हुन सक्छ जो शरीर, द्वारा बोसो Assimilation उल्लङ्घनको हुन सक्छ।
यस्तो पक्ष प्रतिक्रिया रूपमा "Berlamin मड्यूलर" निर्देशन पुस्तिका दबाइ कुनै सङ्केत प्रयोग गर्दा। तर, यो तपाईं माथि निर्धारित dosages र उपचार आहार पालन गर्न सक्दैन भनेर होइन। कहिलेकाहीं "मड्यूलर Berlamin" धन को प्रयोग केही एलर्जी प्रतिक्रिया सक्छ। शरीर को भौतिक अवस्था मा कुनै पनि प्रतिकूल परिवर्तन तुरुन्त आफ्नो डाक्टर संग छलफल गर्नुपर्छ। यो उपचार कुनै पनि खराब नतिजा जोगिन हुनेछ।
एक सुन्दर ठाँउ, प्रत्यक्ष सूर्यका सुरक्षित मा कडाई हुनुपर्छ यो दबाइ "Berlamin मड्यूलर" भण्डारण गर्नुहोस्। यसलाई राम्ररी भण्डारण छैन यदि दबाइ यसको घटक केही उदाहरणका लागि, प्रकाश र पनि उच्च वा तापमान धेरै कम प्रभाव अन्तर्गत भङ्ग गर्न सकिन्छ देखि, यसको लाभदायी गुण हराउछ कि सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
साथै, छोराछोरीलाई दबाइ निःशुल्क पहुँच छैन भनेर निश्चित गर्नुहोस्।
बिक्री लागूऔषधको सर्तहरू
औषधि "Berlamin मड्यूलर" एक निर्धारण बिना फार्मेसी मा जारी छ। तर, यो यो सोचाइ बिना प्रयोग डाक्टर र आफ्नो भेटघाट संग परामर्श बिना गर्न सक्ने होइन।
दबाइ को विशिष्टताको
"मड्यूलर Berlamin" एक भिटामिन जटिल छ जो धनी संरचना, यो बिल्कुल उत्पादनहरु को यो समूह अनुपम बनाउँछ। त्यो किन केही क्षेत्रमा यो किन्न त सजिलो थिएन। विशेषज्ञहरु analogues र पर्यायवाची उपलब्ध "मड्यूलर Berlamin" तयारीको लागि आज भन्नुहोस्। यो जब दबाइ लागत खरिद गर्न चाहे निर्णय विचार गर्नुपर्छ।
दबाइ को प्रभावकारिता दीर्घकालीन अभ्यास द्वारा साबित भएको छ। विरामीहरु हजारौं पहिले नै आफूलाई लागि यो अनुभव गरेका छन्। को विचार दबाइ को मूल्य विशेषज्ञहरूले यसको प्रकारको अनुपम कल भनेर उच्च छ। यसरी, यो अविश्वसनीय धनी संरचना मानव शरीर अधिकतम प्रभाव प्रदान गर्दछ छ।
समाप्त सेना, चयापचय, उच्च गुणवत्ता स्वास्थ्य खाना को normalization को बहाली - यहाँ दबाइ को विचार प्रतिक्रियाहरू को कार्य कसरी वर्णन छ। पनि साना बच्चाहरु को लागि उच्च दक्षता सक्रिय वृद्धि को अवधिमा प्रयोग भएको छ। दबाइ पुछ्ने र अंग प्रणाली विकास गर्ने सही तरिका कोर्न मदत, जीवनको सामान्य सामान लागि सबै आवश्यक संग एउटा सानो शरीर प्रदान गर्दछ। सबै आवश्यक खनिज, साथै micro- र macronutrients भएको बच्चा को सक्रिय वृद्धि को अवधिमा कुनै पनि समस्या को अभाव सुनिश्चित गर्दछ। साथै, अतिरिक्त यस सन्दर्भमा सबै विचलन हटाउन मद्दत गर्छ।
"Berlamin मड्यूलर" - एक अद्वितीय भिटामिन जटिल, विरामीहरु को एक विस्तृत श्रृंखला लागि प्रयोग गरिन्छ जो। यो कारणले गर्दा कुनै पनि शारीरिक र भावनात्मक विकार गर्न छैनन् खान (जो कारण लागि) सक्षम जो आफ्नो भोक गुमाएका, ती लागि प्रभावकारी हुन्छ। साथै, दबाइ सफलतापूर्वक बच्चाहरु को लागि सक्रिय वृद्धि को समयमा, यो सन्दर्भमा कुनै पनि अवस्थित समस्या समाप्त पछि प्रयोग गरिएको।
यो तपाईं प्रत्येक रोगी छैन विरुद्ध औषधि प्रयोग गर्न सक्ने सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यस दबाइ कुनै पनि मामला मा उपेक्षा गर्न सकिँदैन जो केही contraindications छ। रोग र यसको आवेदन गर्न contraindications छन् कि अवस्था भएका विरामीहरु को लागि "मड्यूलर Berlamin" एक तयारी प्रयोग अन्य खराब र पनि खतरनाक प्रभाव पार्न सक्छ। भर्ना लागि निर्देशनहरू र सबै नियम संग सख्त अनुपालन एक भिटामिन जटिल छलफल उपचार को लागि एक जरूरी छ।
सामान्य मा, दबाइ सुरक्षित छ र दबाइ घटक को संभवतः hypersensitive व्यक्तिगत घटक बाहेक लगभग कुनै contraindications छ। यो अप्रिय एलर्जी प्रतिक्रिया प्रकुपित सक्छ। कुनै पनि शारीरिक बेचैनी र गिरावट को उपस्थिति डाक्टर ठीक स्थिति आकलन गर्न सक्षम हुनेछ तुरुन्तै गर्ने सिक्न र हालको उपचार खुराक समायोजन हुनुपर्छ किन कि छ। उपचार समयमा आफ्नो हालत कुनै पनि नचाहिने नतिजा बच्न विशेष होसियार हुनुपर्छ हेर्नुहोस्।
आफू र आफ्नो प्रियजनलाई सबै भन्दा राम्रो हेरविचार। उच्च गुणस्तरीय उत्पादन, आफ्नो विशेष स्थिति को लागि सबै भन्दा प्रभावकारी समाधान हुने चयन गर्नुहोस्। स्वस्थ रहन!
दबाइ "Canison प्लस": प्रयोग, संरचना, analogs र समीक्षा लागि निर्देशन
"Ibuprofen-Hemofarm" - के बाट? सङ्केत गर्छ
राम्रो टेनिस जूता कसरी चयन गर्ने?
रूस मा मछुवा दिवस रूपमा
चरण नुस्खा "मास्को बन्स", वा कसरी मक्खन केक बनाउन कदम?
Cored तार। आवेदन
नवजात शिशुहरु मा Hiccups। गराउनुहुन्छ।
वर्तमान दायित्व र आफ्नो विशेषताहरु
कसरी पुरानो बेच्न रक्सी गर्छन्। के उमेर मा रूस मा रक्सी को बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ